Gbanwee Dumbbell arọ site na ịtụgharị aka, Dumbbell ojii nwere ike imegharị ya na tray maka nwoke na nwanyị ụlọ mgbatị ahụ, yana njikwa ọla mgbochi-slip
Arọ: 24KG na 32KG
nọmba usoro n'usoro :YL004
Kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ndị na-anụ ọkụ n'obi ahụike: UeeVii dumbbell na-agbanwe agbanwe na-akwado ọzụzụ ike dị iche iche site n'ịgbanwe nha dị iche iche.Ihe ngbanwe site na 5lb ruo 25lb.Ọ bụ nnukwu nhọrọ maka ịgbanwe ahịrị akwara na eriri akwara siri ike.
Oghere na Nchekwa oge: Otu dumbbell nwere ike ịhazi ya ruru dumbbells arọ 5.Enwere ike ịchekwa otu dumbbell n'okpuru akwa ma ọ bụ sofa gị.Wepụta ngwa ngwa iji mgbatị ahụ, ma laghachi azụ mgbe mgbatị ahụ gasịrị na-enweghị nhazi mgbagwoju anya.
Ọhụrụ Structural Design: Họrọ ịdị arọ nke ịchọrọ jiri ntugharị nke ọkpụkpọ.Nhazi ihe owuwu mkpọchi 8 na-eme ka a na-ejikọta setịpụ dumbell ojii nke ọma na nke ọma.
Ihe dị elu dị elu: UeeVii dumbbell's plate plate na-ekpuchi ya na mkpuchi ntụ ntụ oyi, nke na-eme ka ọ ghara ịkatọ.Aka na-adịgide adịgide na-ejikọta ya na ihe aluminom alloy na ihe mgbochi na-adịghị mma, nke na-agaghị eme nchara ma nyekwuo nchekwa.
Akụrụngwa arụ ọrụ ahụ zuru oke: Nweta ọzụzụ anụ ahụ dum na-enweghị ịchịkọta dumbbells, hụ na ọ dị mma nke ọzụzụ akwara site na iji ihe dị iche iche na-emega ahụ maka akụkụ dị iche iche….ABU ỌRỤ NA-AKWỤKWỌ N'iji naanị ịkwanye na slide, ị nwere ike ịgbanwe ntọala ịdị arọ gị, nwee ike ịgbanwe n'etiti 5 ruo 25 lbs ozugbo.Mgbanwe arọ dị ngwa & dị mfe.
【 EASY ATORAGE】 Site na dumbbell a na-agbanwe agbanwe, ị gaghị egbu oge ọzọ ịgbakwunye efere dumbbell maka ịgbanwe ịdị ike nke mgbatị ahụ gị.Ọ na-abịa na mkpara ịkwanye pụrụ iche na efere, na-enye gị ohere ịhazigharị na ịdị arọ ndị a na-achọsi ike na ngwa a niile na otu maka mmega ahụ.
Nke gara aga: Dumbbell Pairs Fitness Mbụ Urethane nwere Dumbbell Pairs
Osote: Nhazi Dumbbell na-agbanwe agbanwe - 11-22 Pound na-edozi Dumbbell maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, dị mma maka Core Fitness Adjustable Dumbbell, Dumbbell na-edozi ahụ nke ọma, Nchekwa oghere maka Ụlọ
Dumbbell na-agbanwe agbanwe 50 lbs Fitness Dial Dumbbel...